mamorona tambajotra sosialy
Mamorona anao manokana tambajotra sosialy — io asa io dia tsy ho an’ny olona rehetra. Fa raha ny tetikasa lasa mahomby, dia ho be ny vola miditra. Alohan’ny hanombohana ny asa amin’ny tari-dalana ity, tokony mba hijery ny zava-misy hery.
Eny tokoa, ankehitriny dia ny tambajotra sosialy no tena mahery ny tetikasa. Amin’izy ireo dia saika tsy ho vita ny fifaninanana, toy ny, tokoa, ary ny fikarohana. Ankoatra izany, ity ny tambajotra sosialy nandritra ny fotoana ela dia be ny fifaninanana eo amin’ny fikarohana. Na izany aza, Dia afaka mamorona anao manokana, ny tetikasa iray manokana akany. Amin’izao fotoana izao dia misy ny haino aman-jery sosialy natao ho an’ny rehetra mpampiasa. Fa vitsy ny tetikasa izay te hampiray ny tombontsoan’ny iray vondrona ny olona. Ohatra, Dia afaka miezaka ny mamorona tambajotra sosialy ny mpamily na nazoto mpandeha, mpanjono sy ny mpihaza.
Mikasika io lohahevitra io ihany dia mety ho tsara kokoa mamorona vavahadin-tserasera na ny vohikala tsara. Bebe kokoa, maro ny sehatra fiadian-kevitra natokana ho ireo lohahevitra. Saingy izy ireo dia tsy afaka manome ny vaovao izay manome ny tambajotra sosialy, ny haino aman-jery ny vokatra sy ny kalitaon’ny fifandraisana.
Ny tambajotra sosialy naorina ho an’ny mpampiasa mifandray
Noho izany Dia afaka mahatsapa ho afaka mamorona tetikasa iray na maimaim-poana na kely fifaninanana akany. Ny zava-dehibe indrindra dia ny hahazoana antoka, araka io foto-kevitra io dia nangataka.
Maro no matahotra ny miasa miaraka amin’ny fehezan-dalàna.
Fa manitatra tokoa tsy mila
Ankehitriny ianao dia afaka mahita vonona-nanao iombonana, ny tambajotra sosialy, dia ampy azy ireo ny farany, manana fahalalana ny sasany eo amin’ny sehatry ny tranonkala famolavolana sy ny fandaharana. Famoronana tranonkala Studio sy ny tambajotra sosialy, mazava ho azy, dia lafo be kokoa. Endrika tambajotra sosialy dia manome fahafahana tsara ho an’ny fanodinkodinana. Ny isan’ny toy ny iombonana dia mety ahitana teti-dratsy nitranga fahiny, efa misy amin’ny androntsika.
Isaky ny tambajotra sosialy tokony ho nampirisika. Fampiroboroboana ny tetikasa mety hitranga amin’ny alalan’ny fampitam-baovao sosialy hafa mifandray amin’ny tranonkala sy miaraka amin’ny fanampian’ny contextual dokam-barotra. Tsarovy anefa, fa ny fotsy ho toy ny tetikasa iray mba hampiroboroboana ny tena ilaina.
Tsy mitovy ny toe-javatra toy ny kibo forum
Inona no hevitra ny fahazoana ny mpampiasa raha tsy misy lanjany? Tsy misy famantarana ny amin’ny tambajotra sosialy izay misy na inona na inona mahaliana.
Karazana amin’ny, fara fahakeliny, ireo mpisera alohan’ny hanombohanao fihetsika henjana dia henjana.
Ary izany dia mety ho tratra amin’ny asa isan-karazany
Misy manam-pahaizana dia amidy amin’ny fifanakalozana izay mamorona ny manaraka ny asa: ny mpampiasa dia tsy maintsy misoratra anarana ao amin’ny tranonkala, ho vita tanteraka ny fanadihadiana, araka izay izy ny dia aloa vola.
Fa iray fotsiny webmaster dia inoana mba hameno ny banga ao amin’ny tambajotra sosialy. Ny fampiroboroboana ny tetikasa tahaka izany dia mitaky be dia be ny fampiasam-bola. Ka alohan’ny ianao hamorona ny anao manokana amin’ny tambajotra sosialy, dia ilaina ny manomana ny raharaham-barotra drafitra.
Ankehitriny, aoka ny hiresaka manokana momba ny fomba hamorona ny tambajotra sosialy ny tenanao sy miaraka amin’ny fanampian’ny ny sasany fitaovana azo atao
← Fampidirana ny fitiavana
Tovovavy niaraka →